Tag: Ukama Kushambadzira | Martech Zone
Tag: Ukama Kushambadzira
Muna Nyamavhuvhu, Softchoice yakatumira ongororo kune vatengi vavo uye vakagamuchira mhinduro mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana dzakamiririrwa dzinomiririra mabhizimusi madiki neepakati nepakati (1,444 1,200), mabhizimusi, chikamu cheveruzhinji nemasangano edzidzo. 71% yevakabvunzwa vaive muIT uye muyenzaniso yaive 50 muzana yeUS uye 50 muzana masangano eCanada - saka akamiririra nzvimbo yeNorth American bhizinesi. Chimwe chikamu chehurukuro chinofanirwa kuchema ndiko kumiririra kweWordle kwezvirevo: Zvakakodzera
Vhidhiyo: Sliderocket Beta Inouya Pasina nguva!
Chipiri, June 17, 2008 Chipiri, June 17, 2008 Douglas Karr
Dzvanya kuburikidza kana iwe usingaone vhidhiyo. Mutsara: Waona PowerPoint yeMicrosoft. Asi hausati wamboona Internet-inogoneswa, yekudyidzana yekuratidzira chishandiso seSliderocket - kusvika zvino. Pano Mitch Grasso, CEO uye muvambi, anotiudza nezve Sliderocket iyo kambani uye ozotiratidza demo. Sliderocket iri kugadzirira yeruzhinji beta munguva pfupi, kusaina nhasi.